Suudhka iyo kabatig bararka: furayaasha oo dhan si loogu xidho qaab | Ragga Stylish
Ma ku habboon tahay in la xidho suud iyo dacas? In kasta oo ay yihiin qaybo noocyo aad u kala duwan, kani waa mid ka mid ah kiisaska badan ee isku dhafka rasmiga ah iyo midka aan rasmiga ahayn ay soo saari karaan natiijo aad u qurux badan.
Waxaa jira dad caan ah oo aan tiradooda la sheegi karin oo sheeganaya isku-darka dawaarka kabaha isboortiga. Jidka dhexdiisa sidoo kale aad iyo aad iyo aad u aragto. Haddii aad jeclaan lahayd inaad sidoo kale tijaabiso, kuwa soo socdaa waa furayaasha ay tahay inaad maskaxda ku hayso:
1 Maxaa loo xidhayaa suud iyo dacas
2 Kabaha noocee ah ee sida ugu fiican ugu shaqeeya suud?
3 Waa maxay dharka ugu habboon ee lagu xidho dacas?
4 Sida loo sameeyo muuqaalka
4.1 Ma xiran kartaa xarig?
Maxaa loo xidhayaa suud iyo dacas
MSGM dayrta / jiilaalka 2018-2019
Faa'iidada ugu weyn ayaa ah inay ka raaxo badan tahay, laakiin taasi maahan sababta kaliya. Beddelka kabahaaga ee kabaha isboorti waxay siin doontaa taabasho aad u deggan dharkaaga. Sidoo kale waa isbadal lagu raaxeysto, oo leh qadar fiican oo geesinimo leh taasina waxay kaa caawin doontaa inaad mooddo, tan iyo markii qaab caadi ah waa kan hadda amra.
Marka lagu daro ku siinta raaxada weyn iyo taabashada shaqsi ahaaneed, xirashada suud iyo kabo isboorti ayaa sidoo kale ah xal wax ku ool ah haddii aad tixgeliso in muuqaalkaagu noqday mid aad loo sii saadaalin karo ama aad horeba uga yara caajisnayd had iyo jeer inaad isku mid xidhato.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, in kasta oo ay faa'iidooyinkiisa leeyihiin, Kahor intaadan iskudarsamin ficil ahaanta, waa fikrad fiican in laqiimeeyo macnaha guud si loo hubiyo inaysan ka ahayn habdhaca. Dhinaca kale, haddii aadan rabin inaad ku guuleysato saameyn aan dadaal lahayn, laakiin aad doorbideyso muuqaal caqli badan oo caqli-gal ah, waxaad u badan tahay inaad si fiican u fiicnaan doonto inaad kabahaaga ku ekaato muuqaalka.
Kabaha noocee ah ee sida ugu fiican ugu shaqeeya suud?
Caddaan cad waa sharad aamin ah markay tahay midabka kabaha isboortigaaga markaad ubaahantahay inaad ku labisto suudh. Maqaarka ayaa loo tixgeliyaa inuu yahay qalabka ugu habboon, halka naqshadaha ugu badan ee la isticmaalay ay yihiin kuwa aad u yar. Qaabka kabaha waxay kuxirantahay dookhaaga shaqsiyeed: waxaad isticmaali kartaa kabaha isboortiga ee khafiifka ah ama mid ka mid ah moodooyinka adag ee hadda ku jira moodada.
Sidan oo kale, dharbaaxayaasha maqaarka cad waa fikrad aad u fiican oo lagu xiro dharkaaga, gaar ahaan markay tahay abuurista muuqaalo aan dadaal lahayn oo aad uga tagi karto liiskaaga sare ee xafiiska. Laakiin taasi micnaheedu maahan inaadan tijaabin karin midabbada iyo qalabka kale. Haddii ay shaqeyso, horay u soco.
Haddii aad rabto inaad isku darsato suud iyo kabo isboorti si aad u baxdo habeenkii, tixgeli midabka madow iyo naqshadaha sida ugu yar ee suurtogalka ah, gaar ahaan haddii su'aasha laga hadlayo ay tahay tuxedo. Xidhan inta lagu jiro maalinta, kabo yaryar ayaa kaa caawin doona inaad gaarto si siman oo aan rasmi ahayn, laakiin saameyn yar oo aad u daran.
Kabaha isboortiga ayaa la muujiyay inay ka badan yihiin ku filan oo u dhigma noocyo kala duwan oo dhar ah, laakiin waa lagama maarmaan in fiiro gaar ah loo yeesho xaaladdooda. Naqshad kasta oo loo doorto kabahaaga, waa ku habboon tahay inay u ekaadaan nadiif iyo daryeel ku filan. Xeerkani wuxuu xoojinayaa xulashada maqaarka sida maaddada, maaddaama ay ugu fududahay in la nadiifiyo.
Waa maxay dharka ugu habboon ee lagu xidho dacas?
Ami guga / xagaaga 2018
Dharka ugu habboon ee loogu talagalay kabaha isboortiga ayaa ah kuwa aan nidaamsaneyn, ama ugu yaraan dhammaan kuwa aan lahayn qaab-dhismeed badan. Maaddaama ay yihiin dheecaan badan (sida dharka isboortiga), noocyada noocan ah waxay soo jiitaan shaashad aad u deggan oo waafaqsan isticmaalka kabaha isboortiga.
Dhinaca kale, haddii isku-dhafkan lagu sameeyo suud ganacsi (oo lagu garto inuu leeyahay khadadka ugu qeexan), waa in lagu xisaabtamo inay soo saari karto farqi aad u xoog badan. Qiyaas Harvey Specter (oo ka soo jeeda taxanaha 'Suits') kabaha isboortiga. Marka dacwadaha ganacsiga ma ahan fikrad wanaagsan, gaar ahaan haddii aad sidoo kale ku darto shaati dhar ah iyo xariir xariir ah muuqaalka.
Sida loo sameeyo muuqaalka
Waxa ku hoos xiran jaakada suudka ayaa door muhiim ah ka ciyaara saameynta ugu dambeysa dharkaaga iyo kabaha isboortiga ayaa u muuqda. Waxaad kala dooran kartaa qaybo kala duwan oo aad u aragto inay ugu habboon tahay munaasabad kasta.
Muhiim ma aha inaad ku koobnaato shaatiyada, laakiin waxaad haysataa fursado tiro badan, laga bilaabo shaadhka polo illaa shaati, adigoo maraya shaararka Hawaiian. Dharka quruxda badan ee jilicsan (oo leh qoorta caadiga ah ama sare) shaki la'aan waa dhar kale oo ay tahay inaad tixgeliso. Sida had iyo jeer ah, qiimee duruufaha marka hore oo ku xulo si waafaqsan.
Ma xiran kartaa xarig?
Haddii aad sharad ku gasho, waad xiran kartaa haddii aad rabto. Laakiin waa fikrad fiican inaad iska ilaaliso shaatiyadaha rasmiga ah ee rasmiga ah, halka marka ay timaado waxyaabaha xariga laga jaro, dhibic ayaa ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan ee ujeedkan. Furaha ayaa ah in gogosha jilicsan laga hor mariyo kuwa dhalaalaya.
Si kastaba ha ahaatee, xarkaha badanaa waa la bixiyaa marka la gashanayo suud iyo dacas. Sababta ayaa ah maqnaanshaheeda inuu gacan ka geysto xoojinta qaybta aan caadiga aheyn ee muuqaalka. Marka qaabkan la doorto, waxaa badanaa loo sameeyaa si ka sii dabacsan, markaa waxay macno weyn u leedahay in laga tago xarigga guriga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Suudhka iyo kabaha